Iincwadi zale mihla Iititshala kufuneka zongeze kuLuhlu lwabo "lokuFunda-funda" | Uncwadi lwangoku
Iincwadi zale mihla zale ncwadi kufuneka ukuba ootitshala bongeze kuLuhlu lwabo "lokufunda-kufuneka"
ULidia Aguilera | | Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Ezahlukeneyo
Ngokubuyela esikolweni, ukufundwa okunyanzelekileyo kwabantu abancinci kuyabuya. Uninzi lwezintlu ezilungiselelwa ngootitshala zigcwele ezakudala ezinje Bala uLucanor, Umlingisi womdlalo, IQuijote kunye nemisebenzi eyahlukeneyo ethi, ngamanye amaxesha, ingathandwa ngumfundi. Nangona ndingafuni ukuthoba iklasikhi ngale nto, ngokulula umfundi omncinci unokuxakaniseka lolu hlobo lomsebenzi.
Ngesi sizathu, namhlanje bendifuna ukuzisa uthotho lweencwadi zangoku endicinga ukuba ziya kuba zilungele abafundi abancinci, ukufundwa okuthi, ukuba bendingutitshala, bendizakongeza kuluhlu lwam lokufunda lwabafundi. Ezi ziincwadi zangoku ezithi bafumene uphononongo oluhle kakhulu ngokubanzi kwaye oko kwenza ukuba umfundi acinge ukongeza ekufundiseni kwaye sicinge ukuba ezinye zezinto ezimnandi, ezinomdla nezinika umdla kumfana osesesikolweni.
1 "NdinguMalala" nguMalala Yousafzai
2 "UAristotle noDante bafumanisa iimfihlelo zendalo iphela" nguBenjamin Alire Sáenz
3 "Iiperks zokuba ulahliwe" nguStephen Chbosky
4 "Unyana" ngu-Alejandro Palomas
5 "Eleanor & Park" nguRainbow Rowell
6 "Isifundo sika-Agasti" ngu-JR Palacio
"NdinguMalala" nguMalala Yousafzai
Ndiqala ngencwadi ekuphela kolu luhlu endingakhange ndiyifunde. Nangona ndingakhange ndiyifunde le ncwadi, nangona iphakathi kwam, ibali likaMalala laziwa kwihlabathi liphela kwaye ndizibonile iividiyo zakhe abathetha kuzo. UMalala yintombazana eyenze impembelelo enkulu kwaye ngesizathu esivakalayo, yiyo loo nto ndicinga Incwadi yakho kufuneka ibe lutshintsho lokwenene kwingqondo yomfundi.
NdinguMalala ubalisa ibali likaMalala, imeko yeTaliban kunye nendlela aphakame ngayo waba li icon ukuba namhlanje.
"UAristotle noDante bafumanisa iimfihlelo zendalo iphela" nguBenjamin Alire Sáenz
Le ncwadi ngeSpanishUAristotle noDante bafumanisa iimfihlelo zendalo iphela) kodwa hayi kuhlelo lweSpain, kodwa lweMexico, nangona kunjalo ifikeleleka ngokulula kuye nge-amazon eSpain nakwiivenkile ezahlukeneyo ezithengisa iincwadi kwifomathi ye-epub.
Es incwadi yanamhlanje engobuhlobo, usapho nothando. Le yincwadi emsulwa eneenkwenkwe ezinentloni nezazisayo ezenza ubuhlobo nenkwenkwe ebonakalayo. Incwadi ibonisa ubuhlobo obakhiwe kunye nendlela umlinganiswa ophambili atshintsha ngayo indlela alibona ngayo ilizwe.
Kwelinye icala ndiyacinga Kungafundwa kakuhle ngesiNgesi njengoko ndiyithatha njengeyona ncwadi ilungileyo ukuqala ngolwimi. Ayikokufundwa okuhleliweyo kodwa inqanaba elilula kakhulu, elingaphazamisi kumtsalane wale ncwadi.
"Iiperks zokuba ulahliwe" nguStephen Chbosky
Izinto eziluncedo zokuba ulahliwe uxela ibali likaCharlie, inkwenkwe engenatyala neyaziyo ukuthanda ukufunda nokubonisa ngobomi kodwa engenabahlobo. Ubomi bakhe buqala ukutshintsha xa edibana namakhwenkwe amabini athandwayo esikolweni kwaye afikelele ebusheni.
UCharlie luphawu olwahlukileyo kwaye, ngenxa yoko, kunomdla kakhulu ukubona indlela yakhe yokujonga ubomi kuba ibaleka ingcinga yokufikisa. Libali elilula kodwa elinomtsalane we umbono wenkwenkwana engenamava engena kwinqanaba lokufikisa, efunda ukunxibelelana kunye nokonwaba kodwa ngaphandle kokuphulukana nezinto ezibonakalisa yena.
"Unyana" ngu-Alejandro Palomas
Ndithathela ingqalelo uhlobo lweencwadi endizincomayo, andinakutsibela umbhali waseSpain u-Alejandro Palomas, umbhali weencwadi ezininzi ezithi zinike umfundi intsingiselo yobomi.
Ku "Unyana", u-Alejandro Palomas uxelela umbono kaGuille, inkwenkwe eyazisayo eneengcinga ezininzi kunye nomhlobo omnye. Ukongeza ekusixeleleni ibali ngokwembono kaGuille, ukwasibonisa yona ngabantu abanxulumene naye, bethatha ibali balisa kwinto efihliweyo ngasemva kwalowo mntwana ngoncumo olusisigxina.
Unyana es Incwadi ehamba kunye neyothusayo kwiindawo ezilinganayo ngendlela yoluntu yokubonisa iingxaki, kunye nemfihlakalo yento efihliweyo umlinganiswa ophambili ngasemva.
"Eleanor & Park" nguRainbow Rowell
Eleanor kunye nePaki Ayisixeleli nje ibali elimnandi lothando phakathi kwabakwishumi elivisayo kodwa ikwabonisa ubunyani belowo nalowo kubo: inkwenkwe enesiqingatha se-Asiya kunye nentombazana enxiba ngendlela engaqhelekanga. Abalinganiswa ababini abohluke kakhulu abaphela behlangana kunye nangona kubonakala ngathi abananto inye. Ibali lothando kodwa likrwada kwaye liyinyani.
"Isifundo sika-Agasti" ngu-JR Palacio
Okokugqibela ndingongeza Isifundo sika-Agasti, ibali elibonisa inkwenkwe enobuso obukhubazekileyo kwaye igqiba kwelokuba ifuna ukuya esikolweni endaweni yokuthatha izifundo zabucala. Ngaphezulu kokuba yincwadi yophuculo, yeyona nto inokubonakala ngathi, Le ncwadi ayisibonisi nje inkohlakalo abantwana abancinci abanokuba nayo kodwa ikwasifundisa ukuba sijongane njani nezi ntlobo zeemeko: ngaphandle kokubonisa ukumangaliswa okanye ukukruquka.
Ezi zezinye zeencwadi zangoku, ukuba bendingutitshala, bendiya kubeka uluhlu lwabafundi ukuba bakhethe ezinye iintlobo zamabali, kuba iiklasikhi zilungile kakhulu, kodwa kuyafuneka ukwazisa iindidi ezahlukeneyo kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukunika umfundi ukhetho lokukhetha ibali olithandayo.
Zeziphi iincwadi onokuzongeza?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi zale mihla zale ncwadi kufuneka ukuba ootitshala bongeze kuLuhlu lwabo "lokufunda-kufuneka"
Ibali leCorleones alipheli okanye liqale kwi "The Godfather"
Ifomathi yephepha ibetha eyidijithali kwinkulungwane ye-XXI